MAQAAR-LA'AANTA: GURYAHA DAWOOYINKA IYO KA-HORTAGGA - XOQIN
Qodobada muhiimka ah ee dhirta kala duwan waxaa cadeeyay awowyaashayada badan qarniyadii hore, markii loo isticmaalay daawooyinka asaasiga ah ee cudurada kala duwan. Ma jiro wax khasaare ah oo ku saabsan arrintaan waa xummad, taas oo leh saameyn nasasho iyo anti-bararka. Maalmahan, warshadani waxaa lagu qiimeeyaa ari aan caadi ahayn iyo fursado (oo loo isticmaalo karinta, daawada, perfumery iyo xitaa khamriga cabitaanka khamriga). Caleenta moobiilka waa uun daaweyn gaar ah oo loogu talagalay cuduro kala duwan.
Lippermint ayaa lagu magacaabo digaag, geedo, geedo udgoon, oo gaadhaya 60-80 cm oo dherer ah. Waxay leedahay stem upright tetrahedral mararka qaarkood guduudan oo midab leh, oo leh timo gaaban. Waxaa lagu daboolay noocyo kala duwan oo caleemo cagaaran oo caano ah oo qoyan oo qoyan leh oo leh petioles gaaban iyo cidhifyo. Marmarka qaarkood caleemaha waxay yeelan karaan midabyo bunni ah.
Ubaxyada cawska cagaarka ah waa kuwo yaryar, waxay ku urursan yihiin inflorescences-ka qaabeysan oo leh midab khafiif ah (sida caleemaha, waxay leeyihiin bogsashada guryaha). Corolla ee nooca shan-xubnood, wax yar oo aan joogto ahayn qaabeeya (aan cadeyn laban laaban), casaan ama casaan-cirridka. Geedka ubaxyada ah ee bilaha 7aad iyo 8aad.
Ma taqaanaa? Ma jiro magacyo caan ah oo loo yaqaan 'peppermint' waa qabow ama Ingiriisi, iyo sidoo kale basbaaska iyo hilibka.
Peppermint wuxuu leeyahay dareen diirimaad leh, oo la jarjaray, oo xididdada khafiifka ah, iyo dhirta (waxay u muuqdaan kuwo dhif ah) waxay ka kooban yihiin afar nuts.
Waxyaabaha kiimikada ee dhirta daawada
Guryaha bogsashada ee lebbiska, taas oo, habka, ay leedahay khilaafaadka qaarkood, waxay si toos ah ugu tiirsan yihiin halabuurka kiimikada. Sidaas Qeybaha firfircoon ee firfircooni waa saliid lagama maarmaan ah, fareeshka, fawnado iyo qadhaadh, laakiin waxa ugu muhiimsan iyaga dhexdooda waa menthol (wuxuu ka kooban yahay 60%). Waa cidda, marka lagu daboolo maqaarka ama xuubka xuubka, waxay xanuujisaa dareenka dareenka waxayna keenaysaa dareemid xiiran iyo qabow.
Iyada oo ay kudheeraato "qaboobaha" qaboojiyeyaasha, weelasha dhaadheer oo cidhiidhi ah, iyo weelasha xubnaha gudaha, ee lid ku ah, balaarin. Waxay u badan tahay in tani ay sharaxayso xanuunka xanuunka leh isla xannuunka (menthol waxaa lagu qaadayaa gabal sonkor ah xanuunka gobolka ee wadnaha). Intaa waxaa dheer, walaxdan waxaa loo isticmaali karaa sida daawada suuxinta fudud.
Ma taqaanaa? Dib-u-celinta qarnigii labaatanaad, waxaa loo isticmaalaa sida wax-soo-saarka caanaha ee wax soo saarka ilkaha, iyo illaa 50 sano ka hor, dhibcaha ilkaha, oo laga sameeyay saliid laga soo saaro, waxay ahaayeen kuwo caan ah (waxaa loo isticmaalay in lagu yareeyo ilkaha). Maanta, malmal waxaa loo isticmaalaa mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee cadayga.
Dhaqdhaqaaqyada dhammaan qaybaha qashin-qubka waxay leeyihiin guryaha daawada. Caleemaha, caleemaha iyo ubaxyada waxaa ku jira qadar badan oo aan saliidda muhiimka ah iyo fareeshka la soo sheegay, laakiin waliba qaybaha bayoolojiga ah, sonkorta, dufanka, fiitamiinada C iyo P, carotene, macdanta macdanta, steroids dabiiciga ah iyo antioxidants. Abuurka beeraha waxaa ka mid ah 20% saliidda dufanka loo isticmaalo karinta iyo warshadaha kale.
Isticmaalka lafa-beelka faybarka
Saameynta wanaagsan ee naasku ku leeyahay jirka bani'aadamka ayaa suurogeliyay in la abuuro tiro ballaaran oo daawooyinka fayo-dhawrka ah oo ku salaysan. Gaar ahaan, foomka basbaas waxaa loo isticmaalaa ma aha oo kaliya dadka ama daawada dhaqameed, laakiin sidoo kale aromatherapy, ee soo saarista kalluunnada ama warshadaha cuntada.
Farshaxanka, daawooyinka daaweynta madax xanuun, cudurada wadnaha, xanuunada dareemayaasha, hurdo la'aan, caabuqa nidaamka dheefshiidka, neefta, boogaha caloosha iyo hargabka waxaa lagu abuuray saldhiggan. Sidoo kale, wakiilada noocan oo kale ah waxay waxtar u leeyihiin matag, cudurro qufac, kilyaha ama dhagxaanta beerka, iyo atherosclerosis.
Caleemaha iyo caleemaha geedka waxaa loo isticmaali karaa labadaba mid cusub iyo qaabka la qalajiyey, xaalad kasta, oo lagu gartey dhadhan fiican oo qaboojis ah iyo caraf udgoon oo cadaan leh (oo ay sababtay waxyaabo sarreeya ee menthol).
Sida loo isticmaalo xayawaanka aan daawada lahayn
Markaad ogaatid sida mintida u dhaqmaan jirka bini'aadamka, awowayaasheen ayaa xitaa soo bandhigay cuntooyin badan sida ugu isticmaalka badan. Aqoonta la helay ayaa laga soo gudbay jiilka illaa jiil, iyada oo ay ugu wacan tahay fuska, gooyooyinka, kareemka ama dhirta cawska oo keliya ayaa weli si firfircoon loogu isticmaalaa daawada dhaqanka.
Waa maxay faleebo waxtar leh ee lebbiska
Faleebo qallayl ayaa ka mid ah siyaabaha ugu sahlan ee lagu dhejiyo. Waxaad u baahan tahay kaliya inaad ku shubdo hal shaaha ah ee caleemaha geedka 200 ml oo biyo ah karkaraya, ka dibna ku adkeyso 20 daqiiqo. Ka hor intaadan isticmaalin (iyo isla markiiba) fadhiisan kartaa dareeraha iyo, haddii loo baahdo, ku dar sonkorta. Qaado faleebo ka mid ah qaado oo dhan 2-3 saacadood kasta.
Qalabkan waxaad si fudud uga saari kartaa hurdo la'aan, walwal, madax xanuun iyo xanuunka caloosha, sababtoo ah dhego-beelka laf-dhabarka iyo naaquska is-goysyada, iyo sidoo kale inta badan ka caawiso huurka.
Dabcan, tincture peppermint leedahay hanti daweyn badan, si kastaba ha ahaatee, ha ilaawin ku saabsan contraindications suurto gal ah in dabiiciga ah noocyada kasta oo warshad this (more on dambe).
Qodobbada waxtarka leh ee tufaaxa khamriga
Tincture peppermint ayaa sidoo kale la diyaarin karaa aalkolo, taas oo ka mid ah dhismaha bogsashada oo keliya sii kordhaya. Sidaa awgeed, tincture dabacsan oo laga soo saaro qashinka lafaha ayaa si guul ah loogu isticmaalay in la neefsado sanka oo sanka, trachea, cunaha xabka, ama xitaa boronkiitada. Marka si qunyar ah loo isticmaalo, waa mashiinka kuleylka si fiican loogu xoqo, madax-xanuun, murgacasho ama bararka maqaarka.
Waa muhiim! Cudurrada maqaarka, waxay waxtar badan u leeyihiin in ay qaataan decoction ama faleebo gudaha ah, oo macquul ah xataa xataa enema..
Tincture khamriga macaamiisha waxaa loo abuuray sida soo socota: 20 g caleemo qallalan ah ku shub 100 ml oo ah 75% aalkolo, ka dibna ku adkee meel madow laba toddobaad. Faleebo waxaa lagu baabiiyaa 10-15 dhibcood (waa la qasi karaa biyo) 3-4 jeer maalintii.
Dib-u-habeynta faa'iido leh ee peppermint
Waxaa jira fursado badan oo loogu talagalay diyaarinta decoction of peppermint. Tusaale ahaan, marka la eego in warshadani ay ku habboon tahay in lagu wanaajiyo fayoobaanta jireed isla markaana ay hagaajin karto niyadda, daawooyinka soo socda ee daaweyntani waxay caawinayaan niyadjabka: 1 tbsp. beedka caleemaha la jajabiyey waa in lagu shubaa hal koob oo biyo ah karkaraya iyo karkariyo 10 daqiiqo. Ka dib markii la xaddidayo decoction sida, waxaad u baahan tahay inaad qaadato nus koob laba jeer maalintii - subaxa iyo fiidkii.
Waxaa jira hab kale oo loo sameeyo decoction. Qaado qaado oo ka mid ah miro yar yar iyo ku dar nus litir oo biyo ah. Ka dibna ku dar halbeegga digsi ku shub oo isku kari dabka kulaylka illaa 10 daqiiqo. Ka dib markaa, u ogolaato maraq si aad u dillaacdo 10-15 daqiiqo kuna adkeyso.
Taas macnaheedu waxa weeye in la isticmaalo gudaheeda nus saddex jeer maalintii kahor cuntada. Waxaad ku dari kartaa sonkor ama malab decoction, taas oo kaliya kor u dhadhan dhadhan.
Sida loo isticmaalo saliidda lakabka
Xitaa gawaarida saliidda waxaa loo diyaariyaa iyadoo saldhig u ah cagaarsho - daaweyn waxtar leh xanuunka caloosha, murgashid ama xoqan. Habka ugu fudud ayaa ah in la geliyo biyaha ama ku dar foorno sonkor ah (3-4 dhibcood ayaa ku filan). Intaas waxaa dheer, waxaa badanaa loo isticmaalaa dibedda - daaweynta finanka, cudurrada maqaarka ee caabuqa iyo in lagu xoojiyo madax xanuunka (waxaa loo isticmaali karaa degaanka ku meelgaarka ah inta lagu jiro xanuunka dhanjafka).
Faa'iidooyinka cabbitaanka shaaha
Xaaladaha intooda badan, marka la isticmaalo qashinka sida shaaha, dareenka gaarka ah waxaa loo bixiyaa oo kaliya caleemaha, inkastoo ay sidoo kale leeyihiin wax ka horjeeda. Waa inaan sheegaa shamac shaah ah oo udubdhexaad ah oo cabitaan ah, oo siiya qaboojiyaha gudaha. Waa mid aad u fiican, wuxuu siinayaa xoogga jirka wuxuuna hagaajiyaa hababka dheef-shiidka. Isla markaa, shaaha ayaa saameyn weyn ku leh caafimaadka maskaxda, isaga oo yareynaya murugada dareenka ah iyo caawinta nasashada, iyadoo illowday dhibaatooyinka.
Shaah maax ayaa muddo dheer isku dhistay sida daaweyn daweyn oo wanaagsan, sidaas darteedna wuxuu noqday mid ka mid ah cabitaanka ugu caansan qoysaska casriga ah. Qodobka la isku qurxiyo shaaha waa mid sahlan: hal qaado oo caano ah (oo leh buur) caleemaha la qalajiyey iyo fooriistaanyo ee jaale ah ayaa lagu shubay galaas biyo ah karkaraya waxayna u dhexeeysa 10-15 daqiiqo, ka dib marka shaaha uu si buuxda ugu diyaarsan yahay isticmaalka. Iyada oo ku saleysan doorashooyinka shakhsi ahaaneed, waxaad ku dari kartaa sonkor ama malab cabitaan.
Faa'iidooyinka shaaha naasuhu waa isla markiiba la dareemi karaa: waxay ka caawisaa inay kor u qaaddo tayada waxayna hagaajisaa caafimaadka guud. Si kastaba ha ahaatee, waa in aynaan iloobin in naasku yahay dhir daaweyn, taas oo macnaheedu yahay in aan la isticmaalin.
Ilmaha jiran, shaah peppermint wax yar ayaa loo diyaariyey, yaraynta diirada ee faleebo johannesört by daray biyo badan. Taasi waa, ilmaha yar kadib, waxaad u baahnaan doontaa qaboojiye cawska qallalan iyo nus litir oo ah dareeraha, ama miisaankoodu yar yahay. Ka dib markaad lakulantid, waxaad shaaha u siin kartaa cunuga, laakiin, sida farsamadu u muujiso, waxaa fiican inaad hore u sii darto malab ama sonkorta (tani waxay ka dhigeysaa midka shaaha oo caafimaad leh).
Waa muhiim! Haddii cabitaanku soo noqnoqonayo inuu aad u xoogsaaray, waxay sankaada ku qaboojin karaan qabow ama mayraan afkaaga si ay uga takhalusaan ur aan fiicnayn.
Shaaha darayga waa qalab aad u fiican oo lagu yareeyo astaamaha caloosha, si loola dagaallamo colitis, xanuun inta lagu jiro caadada ama menopause. Mid kasta oo ka mid ah kiisaskaas, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad buuxiso caleemaha cusub (4-5 warqadood) oo leh galaas biyo karkar ah, ka dib markaad dillaacdo ama aad jarjartey qaybo yar yar. Shaaha ayaa ku adkeysanaya 5-7 daqiiqo, ka dib markaad si nabadgelyo leh ugu raaxeysan karto cabitaan leh oo caafimaad leh.
Haddii la rabo, waxaad ku dari kartaa dhir kale oo kale si aad u shamido shaaha. Waxay kor u qaadi doonaan oo kaliya sifooyinka cabitaanka, waxay u adeegi doonaan sidii looga hortagi lahaa hargabka oo gacan ka geysanaya hagaajinta difaaca.
Qalabka daawooyinka ee naas-nuujinta
Waxaa suurtagal ah in la isticmaalo qashinka aan habka caadiga aheyn, sameynta barkin-karsan oo u eg. Si arrintan loo sameeyo, waa inaad udiyaarisaa maraqyada hoos ku xusan: 50 g oo ah caarada ku shub 8 litir oo biyo ah iyo isku kari ilaa 15 daqiiqo, ka dib marka maraqa la keeno 30 daqiiqadood oo kale. Cuntadani waxay ka caawineysaa dagaalka lagula jiro scrofula, xanuunka kudubka ama rickets, inkasta oo aad ku qaadan kartaa bacaha dufan iyo ujeedooyin quruxsan (50 g oo ah cagaarka waxaa lagu dhajiyay 10 litir oo biyo ah). Intaa waxaa dheer, faleebo ee foojignaantan waxaa badanaa loo isticmaalaa enemas.
Dermatoses, kuwaas oo ay weheliyaan cuncun daran, decoction ah ee shimbir sare ee lagu daro qubeyska iyo weelka qashinka.
Yuu yahay isticmaalka qashin-jarista waa ka hortag
Ka doodista sifooyinka faa'iido leh ee lebbiska, waa wax aan macquul aheyn in la xuso khatarta jira ee isticmaalka xaashida daawooyinka. First of dhan, peppermint ayaa ka horjoogsan dadka qaba diiqad hooseeyo. Tani macnaheedu maaha inaad si buuxda uga tagto cabitaankaan, waxaad u baahan tahay inaad si taxadar leh u qaadato.
Noloshu waxay ka hortageysaa haweenka uurka leh iyo hooyooyinka kalkaaliyaasha, inkasta oo ay kicinayaan muuqaalka sunta sunta. Waxaa suurtagal ah in ka dib markaad la tashato takhtar, waxaad mararka qaarkood ku raaxeysan kartaa shaah shimbir ah.
Koox kale, oo ka soo horjeeda qashinka, waxay xasaasiyad ka qaadataa shakhsiyaadkaan dulqaadka ah. Xaaladaha qaarkood, waxaad ka hortagi kartaa cawaaqibyada xun oo kaliya adigoo gabi ahaanba ka tagaya isticmaalka warshadan (nooc kasta).
Warshad lagu qeexay sidoo kale waa ka hortaga dhalaanka, maaddaama menthol ay ku jirto naas-nuujintu waxay keeni kartaa niyadjab ama xitaa joojinta neefsiga ilmaha.
Xaalad waliba, marka la diyaarinayo tinctures iyo qoyaan-goyska, waa lagama maarmaan in la ilaaliyo qiyaasta xitaa dadka aan ku dhicin qaybaha kor ku xusan, maaddaama ay xad-dhaafku u keeni karo lulmo-darro. La tashiga dhakhtarka ka soo qaybgalay, kan, ka dib baaritaannada ku haboon, ayaa kaa caawin doona inaad si fiican u fahamtid qiyaasta qaadashada peppermint peppermint ama decoctions, ma noqon doonto mid aad u adag.